काङ्ग्रेस बाँचेको प्रमाण खोइ शेरबहादुर ?
घटना र विचार, न्युज डेस्क !9months ago October 3, 2018
भारतीय राजनीतिमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने विद्वान् नेता डा. सुब्रमन्ह्यम स्वामीको विचारमा ती मानिस राजनीतिमा सफल मानिन्छन् जो सधैँ कुनै न कुनै रूपले चर्चा (भूमिका) मा रहिरहन्छन् । पद प्राप्तिलाई सफलता र पद नपाउनुलाई असफलता ठान्नुहुँदैन, निरन्तर चर्चामा आइरहन सक्नु नै सफल राजनीतिकर्मीको विशेषता भन्ने उनको भनाइ हो । म्याकियाबेली या रुसोका परिभाषामा राजनीति साध्य प्राप्तिका प्रभावकारी साधन मानिए पनि प्लेटो र अरिस्टोटलहरूको विचारमा जनसेवाको निष्पक्ष एवम् निस्वार्थ कर्म हो राजनीति । प्लेटोले आदर्श राज्यको परिकल्पना जसरी गरेका छन् त्यसले राजनीतिप्रतिको उनको बुझाइ कति उच्च र भिन्न छ भन्ने दर्शाउँछ । तर, संसारका अधिकांश मुलुकमा राजनीति समाधानभन्दा पनि समस्याको मुख्य स्रोत बनेका छन् ।